Matafura Anogadzika, Bindu & Patio Sets, Pet Zvigadzirwa - ORION
Imba yekupinda & Kupinda
Living Kamuri Décor
Simbi Wall Wall / Inoyerera pasherefu / Wall Mirror
Kurarama Kamuri Murongi
Sherefu inoyerera / Kofi / Matafura eNesting Nightstands / Padivi matafura Mabhenji / zvigaro
Living Kamuri Samani
Kofi / Nesting Tafura Yemasikati Masitendi / Masivi matafura Mabhenji / Zvigaro / Screen
Kushongedza Kweimba yekurara
Hazvina maturo & Hazvina maturo Mabhenji / Mubhedha Wemubhedha
Nguo Racks / zvinoyangarara pasherefu
Dhishi Holder / Trolley / Ngoro
Waini Rack & Magirazi Ekubata / Basket
Bindu & Patio Furniture
Bindu Fenzi / Bindu Mabhenji / waMosesi Tafura & Zvigaro /
Bindu & Patio Murongi
Kudyara Mira / Ruva Hari /
Bindu & Patio Décor
Bindu Stakes / Simbi Mhuka / Bindu Mhepo Mabhero / Mhepo Chimes / Mhepo Spinner
Amburera Mira / Nguo Racks
Wall Mirror / rusvingo art simbi
Imba yekudyira & Kupinda Furniture
Yakakwira standard zvinhu zvemhando yepamusoro ndiyo musimboti wepakati pegwara redu rekugadzira kupa zvigadzirwa zvinogara kune vedu vatinoda.
Yedu yezvinhu timu inogadzira huni, simbi simbi uye girazi fenicha kune yako Kumba uye Kicheni kushandiswa neakasarudzika yekugadzira dhizaini nemazhinji masitaira esarudzo.
Mutengo wekukwikwidzana uye neshure yekutengesa sevhisi inoramba iri kukosha kweyakaitika kune vatengi.
Iron fanicha yekutenga matipi
Midziyo yesimbi yakarongedzwa yakakodzera kuiswa munzvimbo zhinji dzakadai semabalkoni, dzimba dzekurara, dzimba dzekugara, nezvimwewo fenicha yesimbi ndizvo zvigadzirwa zvinonyanya kudiwa nevanhu kushongedza imba, hofisi, zvikoro, gadheni nepatio. Ivo vanopa kumusha chitarisiko chitsva chizere neanoyevedza chitarisiko. Saka maitiro eku ...
Chikamu Chakakurumbira cheIron Art
Iron Art 3 Iron art, kazhinji kutaura, hunyanzvi hunoshandura akaomeswa mabheetti akagadzirwa nesimbi (anonzi ironware) kuita art objets. Nekudaro, hunyanzvi hwesimbi hauna kusiyana neyakajairwa ironware. Pfungwa yehunyanzvi hwesimbi makore mashoma apfuura, kubvira panguva ye Iron Age, vanhu vakatanga kugadzira zvigadzirwa zvesimbi ....
Nhoroondo yesimbi yekushongedza
Iyo inonzi simbi art ine nhoroondo refu. Chinyakare zvigadzirwa zvehunyanzvi zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa pakushongedza kwezvivakwa, dzimba uye mapindu. Iyo yekutanga simbi zvigadzirwa zvakagadzirwa kutenderedza 2500 BC, uye Heti Humambo muAsia Minor inowanzoonekwa senzvimbo yekuberekerwa yesimbi art. Vanhu mu ...
MASHOKO ANOKOSHA KUKOSHESA MHURI YAKO NEMATANDA NERONI ART
Nhasi muchinyorwa chino, ndinoda kugovana neshamwari matipi ekushongedza imba yako nenzira yakakosha. Iyi gumi nematanhatu nzira dzekushongedza dziri nyore kwazvo uye dzinonyanya kuvakirwa padanda nehunyanzvi hwesimbi kugadzira runako uye yakanakisa nzvimbo yemba. ▲ Maitiro ekuisa iyo TV skrini uye yekumashure madziro? ...
Hwakagadzwa muna 2013, OI & T Co., Ltd.iri Licheng disctrict Quanzhou guta Fujian dunhu, PR China. Iyo OI & T Co Ltd indasitiri chirimwa inovhara nzvimbo inosvika mazana maviri nemazana maviri emamirimita mita nevashandi zana nevashandi vevashandi vehunyanzvi uye timu ine ruzivo yevatungamiriri vanotungamira. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisirwa asi hazvingogumira kune simbi, huni & zvigadzirwa zvemumba zvemosisi; midziyo yemukati neyekunze sematafura, zvigaro, masitendi emiti, maruva muhari, marongero epamba uye gadheni zvishongo zvesimbi mhuka. Isu tinopa OEM masevhisi uye tinogamuchira akajairwa maodha kubva kune edu makuru vatengi kubva kuNorth America, Europe, Australia, Middle East, Japan nedzimwe nyika.
Isu takavimbiswa kambani yenyika dzese. Tenga nesu nechivimbo
Vatengi kugutsikana uye 100% yakanaka mhinduro yekudzokorora
Zvigadziriswazve zvigadzirwa uye Eco-Shamwari zvigadzirwa
simbi yemadziro art, Bindu Kushongedza Simbi, akatungamirira mwenje, mwenje yezuva, Lantern yekushongedza, mwenje pendant mwenje,